မျက်နှာများတဲ့ စကားလုံး (Mean ၏ အဓိပ္ပါယ်အစုံစုံ) - Myanmar Network
မျက်နှာများတဲ့ စကားလုံး (Mean ၏ အဓိပ္ပါယ်အစုံစုံ)
Posted by Betty on January 23, 2015 at 11:50 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးစွဲ ပြောဆိုနေတဲ့ စကားတွေထဲမှာ အဓိပ္ပါယ် ၂ မျိုးလောက် ရှိတတ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေက အဓိပ္ပါယ် ဆင်တူပေမဲ့ အသုံးမှာ ကွဲပြားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ စကားလုံးတစ်လုံးထဲက word form ကိုလိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးစီထွက်တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ စကားလုံးကတော့ mean ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါဘဲ။ mean ဟာ noun အနေနဲ့ ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး၊ verb အနေနဲ့ ဆိုရင် တစ်မျိုး၊ adjective အနေနဲ့ ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးရှိတဲ့ မျက်နှာများတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Mean ကို အဓိကအားဖြင့် verb အနေနဲ့ အသုံးများပါတယ်။ သူ့ရဲ့ past tense နဲ့ past participle က “meant” ဖြစ်ပါတယ်။ “meaned” မဟုတ်ဘူးနော်။ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ စကားတစ်ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အကြောင်း ပြောချင်တဲ့အခါ mean ဆိုတဲ့ verb ကို သုံးပါတယ်။ ဥပမာ-
“What does ‘promissory’ mean?”
“What does ‘imperialism’ mean?”
‘Pandemonium’ means ‘the place of all devils’.
mean နဲ့ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါ auxiliary ‘does’ ကိုထည့်ပြီး ရေးရ ပြောရတယ်။ mean ချည်း သက်သက်နဲ့ မေးခွန်းလုပ်လို့ မရဘူး။ ဥပမာ-
What means ‘promissory’? လို့ ပြောရင် မှားတယ်နော်။ အဲ့ဒါလေးကို သတိပြုရမယ်။
(၂) တစ်ခုခုကြောင့် (တစ်ဦးဦးရဲ့ သို့မဟုတ် လူအများရဲ့) ယုံကြည်မှု၊ ခံယူချက်စတဲ့ (attitude) တို့၊ လက်ခံကျင့်သုံးမှု (type of behavior) တို့ အပေါ် သက်ရောက်မှုကို ပြောချင်ရင် mean အနောက်က ‘-ing’ form နဲ့ရေးတဲ့ verb ကိုသုံးပြီး ပြောရတယ်။ ဥပမာ-
Being aware means being free from prejudice.
Some people will buy them even if it means defying the law.
(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ညွှန်းပြီး ပြောတယ်။ (refer လုပ်တယ်) အကြောင်း တစ်ခုခုကို ပြောဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်လည်း mean နဲ့သုံးပြီး ပြောပါတယ်။ ဥပမာ-
“I know the guy you mean.”
“I thought you meant to take your own car.”
လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တို့ ယုံကြည်ချက်တို့ကို ပြောဆိုတဲ့အခါ mean နဲ့ မသုံးဖို့ သတိထားရမယ်နော်။ ဥပမာ-
“Most of the directors mean he should resign” လို့ ပြောရင် မှားပါတယ်။ Director အများစုရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို mean အစား think နဲ့ သုံးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် “Most of the Directors think he should resign.”လို့ ပြောမှ မှန်ပါတယ်။
အလားတူဘဲ အများစုရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ဖေါ်ပြတဲ့ ဒီလို ဥပမာမျိုးမှာ - “His subjects mean that he is descended from God.” ဆိုရင် မှားပါတယ်။
“His subjects believe that he is descended from God.” နဲ့ ရေးမှ မှန်ပါတယ်။
အခြား ယုံကြည်ချက်၊ တင်ပြချက်တွေကို ဖေါ်ပြတဲ့ ဥပမာတွေကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Most scientists believe the atmosphere of Jupiter is too unstable for life.
(၁) noun အနေနဲ့ သုံးတဲ့ ‘mean’ ကိုတော့ အမြဲတမ်း ‘means’ ဆိုပြီး ‘s’ ထည့်ရေးရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ singular ရော plural form တွေက ‘means’ ပါ။ မမေ့နဲ့နော်။ ‘Noun’ အနေနဲ့ဆိုရင် ‘means’ ဆိုတာ ‘နည်းလမ်း’ လို့ လွယ်လွယ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ လုပ်ပုံ လုပ်နည်း ပေါ့နော်။ ဥပမာ-
Scientists are working to deviseameans of storing this type of power.
The essential means of transport for the islanders remains the donkey.
An attempt was made to sabotage the ceremony by violent means. (ဒီမှာ means ကို plural အနေနဲ့ သုံးထားတယ်။)
(၂) By means of
တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို (သို့မဟုတ်) အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး လုပ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ by means of ကိုသုံးပါတယ်။ ဥပမာ-
The rig is anchored in place by means of steel cables.
MPT SIM cards were sold by means of drawing lots.
(၃) By all means
By all means လို့ ပြောရင် တစ်စုံတစ်ခုက်ို လုပ်ဖို့ လိုလိုလားလား ခွင့်ပြုတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါဘဲ။ Conversation တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာ-
“If you feel you need to ask any questions, by all means do so.”
“Would it be all right if I leftabit early?”- “Yes, yes, by all means.”
‘By all means’ ကို “ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်” “ဘယ်လိုဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ” စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ မသုံးမိစေနဲ့။ မှားတယ်နော်။ ဥပမာ- “သူက ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမှာဘဲ” လို့ပြောချင်တဲ့အခါ
“He was determined to become leader by all means.” ဆိုရင် မှားတယ်။
“He was determined to become leader by whatever means.” လို့ ပြောမှ မှန်တယ်။ မှတ်ထားနော် “by whatever means” တဲ့။
(၁) Mean ကို adjective အနေနဲ့ သုံးတဲ့အခါ (ငွေကြေး၊ ဥစ္စာ စသည်တို့) ကပ်စီးနည်းတယ်၊ စေးကပ်တယ်၊ တွန့်တိုတယ် စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကို သဘောမကျတဲ့ ရှုထောင့်က ပြောပါတယ်။ ဥပမာ-
Becomearegular customer and don’t be mean with the tips.
(၂) ငွေကြေး သုံးစွဲဘို့ တွန့်တိုတယ်၊ ခြွေတာတယ် စသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ mean ရဲ့ အလားတူ adjective တွေကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
စသည်ဖြင့် adjective တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲက economical နဲ့ frugal တွေက မဆိုးလွန်း၊ မကောင်းလွန်းဘဲ ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို အိနြေ္ဒ ရှိရှိ သုံးနိုင်တဲ့ အရောင်မဆိုးထားတဲ့ neutral words တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
Rice, fish-paste and green salads have for years been the staple dishes of economical Myanmar country folk.
(၃)Thrifty ကတော့ ခြိုးခြံခြွေတာ စုဆောင်းတတ်တဲ့သူတွေကို ချီးမွမ်း ပြောဆို သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးပါ။
(၄) ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ miserly, parsimonious, penny-pinching, stingy, tight နဲ့ tight-fisted တွေအားလုံးကိုတော့ မနှစ်သက်ဖွယ်ရာ အမူအကျင့်အနေနဲ့ ပြောဆို ပုံဖေါ်ရင် သုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ parsimonious ကတော့ formal ဖြစ်ပါတယ်။ Casual conversation တွေမှာ သိပ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ ဥပမာ အချို့အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
He was commercially stingy, absorbed with the cost of glue, paper clips and string.
At home he was churlish, parsimonious, and unloving to his daughter.
Penny-pinching ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ မိန့်ခွန်းဟောပြောသူတွေ သုံးတာများပါတယ်။
He said the government’s penny-pinching policies were causing loss of life.
(၁) Mean ကို V-ing form နဲ့ meaning ဆိုပြီး သီးခြားသုံးတဲ့အသုံး ရှိပါတယ်။ စကားလုံးတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဟန်ပန်တွေ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ “ဆိုလိုရင်း” ကို meaning နဲ့ သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။
The word ‘guide’ is used with various meanings.
The gesture has the same meaning throught Myanmar.
တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောသွားတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကိုလည်း meaning နဲ့ ပြောတယ်။
The meaning of the remark was clear.
(၂) ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ (intention) ကို ဆိုလိုရင်း ဆိုတဲ့ (meaning) နဲ့ ခွဲခြား ပြောရတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို နဲ့ meaning မပြောရဘူး။ ဥပမာ-
His meaning was to reach the borders before night fall. လို့ မပြောရဘူး။
His intention was to reach the border before night fall. လို့ ပြောရတယ်။
Their intention was to make the trip inconspicuous.
(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခု အပေါ် ထင်မြင် ယူဆချက် (opinion) ကို ဖေါ်ညွန်းရာမှာ ‘meaning’ ကို မသုံးရပါဘူး။ ဥပမာ-
“I think he should resign. What’s your meaning?” လို့ ပြောရင် မှားပါတယ်။
“I think he should resign. What’s your opinion?” လို့ ပြောရပါတယ်။ နောက်ထပ် ဥပမာတွေ ဖေါ်ပြရင်း အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။
My opinion is thatafarm-worker is as important asaskilled-worker in any other industry.
If you want my honest opinion, I don’t think it will work.
အီဒီယမ်တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးတတ်ဖို့ လိုအပ်ခြင်း (It calls for id...
၀ါကျတစ်ခု၏ လေးနက်မှုကို ပေါ်လွင်စေသော အထူးပုံစံများ
ကြှနျတျောတို့ နစေ့ဉျသုံးစှဲ ပွောဆိုနတေဲ့ စကားတှထေဲမှာ အဓိပ်ပါယျ ၂ မြိုးလောကျ ရှိတတျတဲ့ စကားလုံးတှေ ရှိပါတယျ။ တဈခြို့စကားလုံးတှကေ အဓိပ်ပါယျ ဆငျတူပမေဲ့ အသုံးမှာ ကှဲပွားတာတှေ ရှိပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစာမှာ စကားလုံးတဈလုံးထဲက word form ကိုလိုကျပွီး အဓိပ်ပါယျ တဈမြိုးစီထှကျတဲ့ စကားလုံးတဈလုံး ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးကတော့ mean ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါဘဲ။ mean ဟာ noun အနနေဲ့ ဆိုရငျ အဓိပ်ပါယျတဈမြိုး၊ verb အနနေဲ့ ဆိုရငျ တဈမြိုး၊ adjective အနနေဲ့ ဆိုရငျ အဓိပ်ပါယျတဈမြိုးရှိတဲ့ မကျြနှာမြားတဲ့ စကားလုံး ဖွဈပါတယျ။
(၁) Mean ကို အဓိကအားဖွငျ့ verb အနနေဲ့ အသုံးမြားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ past tense နဲ့ past participle က “meant” ဖွဈပါတယျ။ “meaned” မဟုတျဘူးနျော။ စကားလုံးတဈလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျ၊ စကားတဈခှနျးရဲ့ အဓိပ်ပါယျ အကွောငျး ပွောခငျြတဲ့အခါ mean ဆိုတဲ့ verb ကို သုံးပါတယျ။ ဥပမာ-
mean နဲ့ မေးခှနျးမေးတဲ့အခါ auxiliary ‘does’ ကိုထညျ့ပွီး ရေးရ ပွောရတယျ။ mean ခညျြး သကျသကျနဲ့ မေးခှနျးလုပျလို့ မရဘူး။ ဥပမာ-
What means ‘promissory’? လို့ ပွောရငျ မှားတယျနျော။ အဲ့ဒါလေးကို သတိပွုရမယျ။
(၂) တဈခုခုကွောငျ့ (တဈဦးဦးရဲ့ သို့မဟုတျ လူအမြားရဲ့) ယုံကွညျမှု၊ ခံယူခကျြစတဲ့ (attitude) တို့၊ လကျခံကငျြ့သုံးမှု (type of behavior) တို့ အပျေါ သကျရောကျမှုကို ပွောခငျြရငျ mean အနောကျက ‘-ing’ form နဲ့ရေးတဲ့ verb ကိုသုံးပွီး ပွောရတယျ။ ဥပမာ-
(၃) တဈစုံတဈယောကျကို ညှနျးပွီး ပွောတယျ။ (refer လုပျတယျ) အကွောငျး တဈခုခုကို ပွောဖို့ ရညျရှယျတယျဆိုရငျလညျး mean နဲ့သုံးပွီး ပွောပါတယျ။ ဥပမာ-
လူတှရေဲ့ ထငျမွငျခကျြတို့ ယုံကွညျခကျြတို့ကို ပွောဆိုတဲ့အခါ mean နဲ့ မသုံးဖို့ သတိထားရမယျနျော။ ဥပမာ-
“Most of the directors mean he should resign” လို့ ပွောရငျ မှားပါတယျ။ Director အမြားစုရဲ့ ထငျမွငျခကျြကို mean အစား think နဲ့ သုံးရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ “Most of the Directors think he should resign.”လို့ ပွောမှ မှနျပါတယျ။
အလားတူဘဲ အမြားစုရဲ့ ယုံကွညျခကျြကို ဖျေါပွတဲ့ ဒီလို ဥပမာမြိုးမှာ - “His subjects mean that he is descended from God.” ဆိုရငျ မှားပါတယျ။
“His subjects believe that he is descended from God.” နဲ့ ရေးမှ မှနျပါတယျ။
အခွား ယုံကွညျခကျြ၊ တငျပွခကျြတှကေို ဖျေါပွတဲ့ ဥပမာတှကေို အောကျမှာ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
(၁) noun အနနေဲ့ သုံးတဲ့ ‘mean’ ကိုတော့ အမွဲတမျး ‘means’ ဆိုပွီး ‘s’ ထညျ့ရေးရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ singular ရော plural form တှကေ ‘means’ ပါ။ မမနေဲ့နျော။ ‘Noun’ အနနေဲ့ဆိုရငျ ‘means’ ဆိုတာ ‘နညျးလမျး’ လို့ လှယျလှယျမှတျလို့ ရပါတယျ။ လုပျပုံ လုပျနညျး ပေါ့နျော။ ဥပမာ-
An attempt was made to sabotage the ceremony by violent means. (ဒီမှာ means ကို plural အနနေဲ့ သုံးထားတယျ။)
တဈစုံတဈခုကို လုပျတဲ့အခါ နညျးလမျးတဈခုခုကို (သို့မဟုတျ) အရာဝတ်ထုတဈခုခုကို အသုံးပွုပွီး လုပျတယျလို့ ပွောတဲ့အခါ by means of ကိုသုံးပါတယျ။ ဥပမာ-
By all means လို့ ပွောရငျ တဈစုံတဈခုကို လုပျဖို့ လိုလိုလားလား ခှငျ့ပွုတယျလို့ ဆိုလိုတာပါဘဲ။ Conversation တှမှော အသုံးမြားပါတယျ။ ဥပမာ-
‘By all means’ ကို “ဘယျနညျးနဲ့ ဖွဈဖွဈ” “ဘယျလိုဘဲ လုပျရလုပျရ” စတဲ့ အဓိပ်ပါယျတှနေဲ့ မသုံးမိစနေဲ့။ မှားတယျနျော။ ဥပမာ- “သူက ဘယျနညျးနဲ့ ဖွဈဖွဈ ဦးဆောငျသူ ဖွဈဖို့ ကွိုးစားမှာဘဲ” လို့ပွောခငျြတဲ့အခါ
“He was determined to become leader by all means.” ဆိုရငျ မှားတယျ။
“He was determined to become leader by whatever means.” လို့ ပွောမှ မှနျတယျ။ မှတျထားနျော “by whatever means” တဲ့။
(၁) Mean ကို adjective အနနေဲ့ သုံးတဲ့အခါ (ငှကွေေး၊ ဥစ်စာ စသညျတို့) ကပျစီးနညျးတယျ၊ စေးကပျတယျ၊ တှနျ့တိုတယျ စတဲ့ အဓိပ်ပါယျနဲ့ ပွောတာ ဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့ကို သဘောမကတြဲ့ ရှုထောငျ့က ပွောပါတယျ။ ဥပမာ-
(၂) ငှကွေေး သုံးစှဲဘို့ တှနျ့တိုတယျ၊ ခွှတောတယျ စသညျ့ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ mean ရဲ့ အလားတူ adjective တှကေို အောကျမှာ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
စသညျဖွငျ့ adjective တှလေညျး ရှိပါတယျ။ သူတို့ထဲက economical နဲ့ frugal တှကေ မဆိုးလှနျး၊ မကောငျးလှနျးဘဲ ဘယျအခွအေနမှောမဆို အိန်ဒွေ ရှိရှိ သုံးနိုငျတဲ့ အရောငျမဆိုးထားတဲ့ neutral words တှေ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ-
(၃)Thrifty ကတော့ ခွိုးခွံခွှတော စုဆောငျးတတျတဲ့သူတှကေို ခြီးမှမျး ပွောဆို သုံးနှုနျးတဲ့ စကားလုံးပါ။
(၄) ကနျြတဲ့ စကားလုံးတှဖွေဈတဲ့ miserly, parsimonious, penny-pinching, stingy, tight နဲ့ tight-fisted တှအေားလုံးကိုတော့ မနှဈသကျဖှယျရာ အမူအကငျြ့အနနေဲ့ ပွောဆို ပုံဖျေါရငျ သုံးပါတယျ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ parsimonious ကတော့ formal ဖွဈပါတယျ။ Casual conversation တှမှော သိပျတှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီစကားလုံးတှနေဲ့ ဥပမာ အခြို့အောကျမှာ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
Penny-pinching ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ဂြာနယျလဈတှေ၊ မိနျ့ခှနျးဟောပွောသူတှေ သုံးတာမြားပါတယျ။
(၁) Mean ကို V-ing form နဲ့ meaning ဆိုပွီး သီးခွားသုံးတဲ့အသုံး ရှိပါတယျ။ စကားလုံးတှေ၊ လှုပျရှားမှုတှေ၊ ဟနျပနျတှေ အရာဝတ်ထုတှရေဲ့ “ဆိုလိုရငျး” ကို meaning နဲ့ သုံးလေ့ ရှိပါတယျ။
တဈစုံတဈယောကျ ပွောသှားတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရငျးကိုလညျး meaning နဲ့ ပွောတယျ။
(၂) ရညျရှယျခကျြဆိုတဲ့ (intention) ကို ဆိုလိုရငျး ဆိုတဲ့ (meaning) နဲ့ ခှဲခွား ပွောရတယျ။ တဈစုံတဈယောကျက တဈခုခုလုပျဖို့ ရညျရှယျတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို နဲ့ meaning မပွောရဘူး။ ဥပမာ-
His meaning was to reach the borders before night fall. လို့ မပွောရဘူး။
His intention was to reach the border before night fall. လို့ ပွောရတယျ။
(၃) တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ကိစ်စတဈခုခု အပျေါ ထငျမွငျ ယူဆခကျြ (opinion) ကို ဖျေါညှနျးရာမှာ ‘meaning’ ကို မသုံးရပါဘူး။ ဥပမာ-
“I think he should resign. What’s your meaning?” လို့ ပွောရငျ မှားပါတယျ။
“I think he should resign. What’s your opinion?” လို့ ပွောရပါတယျ။ နောကျထပျ ဥပမာတှေ ဖျေါပွရငျး အဆုံးသတျ လိုကျပါတယျ။
အစညျးအဝေးကို ဦးဆောငျကငျြးပရနျ အင်ျဂလိပျစကား အသုံးအနှုနျးမြား
အီဒီယမျတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ သုံးတတျဖို့ လိုအပျခွငျး (It calls for idiomatic expression by Guy Perring)
ဝါကတြဈခု၏ လေးနကျမှုကို ပျေါလှငျစသေော အထူးပုံစံမြား
Permalink Reply by soe naing on January 23, 2015 at 20:58
There isausage that can be used asadialogue like
" You know,you shouldn't be so mean to me all the time".
" He is so mean to me"
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on January 26, 2015 at 13:49
Permalink Reply by Win Naing on January 30, 2015 at 12:57
Permalink Reply by htaylim on February 23, 2016 at 18:06
Permalink Reply by Aung Myo Htut on February 25, 2016 at 11:03
Permalink Reply by win tha won on April 7, 2016 at 13:41
ကျေးဇူးဘဲဗျ၊ Mean ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို တခါတလေ ပြန်ရတာ အဆင်မပြေလို့။ အခုလိုမျိုးသိလိုက်ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။